android ဖုန်းများအတွက် CM ဖလက်ရှမီး APK ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » CM ဖလက်ရှမီး
CM ဖလက်ရှမီး APK ကို
ဤသည်ရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့လက်နှိပ်ဓာတ်မီး tool ကိုသင့်ရဲ့ Android ဘဝကိုမြှင့်တင်ရန်နိုငျကွောငျး Cheetah မိုဘိုင်းကနေနောက်ဆုံးပေါ် App ဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝအခမဲ့, ဒီစူပါတောက်ပလက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုချက်ချင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သံလိုက်အိမ်မြှောင်, အရေးပေါ်တောက်နှင့်သင့်အဆင်ပြေရောင်စုံအလင်းရောင်ပါဝင်သည်။
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး + ယုံကြည်စိတ်ချရသော + အရောင်းသွက် + အခမဲ့ = CM ဖလက်ရှမီး
1 [အဓိကအင်္ဂါရပ်များ] ။ ထိပ်တန်းအခမဲ့ဖလက်ရှမီး: လူတိုင်းအမှောင်ထဲမှာတက်ပွင့်လင်းကူညီရန်ဖုန်းကိုမော်ဒယ်များတန်ချိန်ထောက်ပံ့
2 ။ ချက်ချင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့: အဘယ်သူမျှမကသင်၏လမ်းကြောင်းကိုရှာတွေ့န်းကျင်စောင့်ဆိုင်းနေ
3 ။ အလွန်သေးငယ်သောအရွယ်အစား: အသေးစားအရွယ်အစားကို install နှင့် RAM ကို 1MB ထက်လျော့နည်းများကိုအသုံးပြု!
4 ။ အရေးပေါ် Button လေး: ဤခလုတ်ကိုထပ်တလဲလဲတစ်ဦးအရေးပေါ်အချက်ပြ flash နှင့်လူများရှိသည်ဖို့သင်ကိုယ်တိုင်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ထဲတွင်ရှာတွေ့ပါက, စာနယ်ဇင်းသင်တို့ကိုကယ်တင်လာ
5 ။ သံလိုက်အိမ်မြှောင်: အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ဦးတည်ချက်ရှာမည်
6 ။ variable Lighting: အလင်းကိုပျော့ပြောင်းမှသင်နှစ်သက်တဲ့အရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ
7 ။ ထိရောက် Power: ကအခြားဓာတ်မီးကဲ့သို့သင်တို့အဘက်ထရီကြမည်မဟုတ်!
* CM ဖလက်ရှမီးတစ်ဦးအလင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာကင်မရာ flash ကိုအသုံးပြုသည်, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်သင့်မျက်နှာပြင်တောက်ပ setting ကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါကင်မရာကိုခွင့်ပြုချက်ကင်မရာ flash ကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါသည်။
* အမျိုးမျိုးအလင်းရင်းမြစ်များကသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုပေါ် မူတည်. အသုံးပြုနိုင်ပြီး, သင်သည်သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အညီအရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
CM ဖလက်ရှမီးပါဝါထိရောက်ပေမယ့် * အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးပေါ်မှာထွက်ခွာဘက်ထရီမည်! လိုအပ်တဲ့အခါမှသာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။
အသုံးပြုသူတုံ့ပြန်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ apps များကိုကြီးမြတ်စေကူညီပေးသည်! သင်သည်မည်သည့်မှတ်ချက်များ, အကြံပေးချက်များသို့မဟုတ်စကားလုံးများကိုရှိပါကသင်သည်ငါတို့နှင့်အတူဝေမျှချင်ပါတယ်, သင် cm_flashlight@conew.com မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူထိတွေ့ရနိုင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
အန်းဒရွိုက်လိုအပ်သည်: 2.2 နှင့်တက်
Cheetah မိုဘိုင်း: အားဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
အကောင်းဆုံးနဲ့ LED Torch ...
PenCake - မှတ်စု၊ ဒိုင်ယာရီ၊ ဂျာနယ်၊ စာရေးသူ
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမိတ်ဖက် - ကယ်လိုရီကောင်တာနှင့်အလေးချိန် ...
အသံမီတာ - SPL မီတာ၊ dB မီတာ၊